Hawaasti Oromoo Guyyaa Gootota Oromoo kabajatan WBOf Gumaata Kennan
Date: April 29, 2012Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, 29 Ebla 2012) Hawaasti Oromoo Australia Kibaa, magaalaa Adelaide keessa jiraatan gaafa Ebla 22/04/2012 ayyaana guyyaa Gootota Oromoo sirna hoo’aadhaan jabatanii kabajatan; ABO fi WBO jabeessuufis gumaata maallaqaa gumaachan.
Ayyaanni kun eebba mangoodoo Oromootiin banamuun, itti fufuun faaruun alaabaa fi tokkumaan farfatamaniiru,itti dabaluunis gootowwan qaqqalii QBO Oromoof jecha wareegaman yaadatameera.
Oduun kun akka hubachiisutti, ayyaana kana irratti hawaasti Oromoo jechuunis, deggertoonni fi miseensotni ABO irratti qooda fudhachuun qabsoo Bilisummaa Oromoo gaaffii sabummaa Oromoo dhugoomsuuf finiinaa jiruuf deeggarsa qaban ibsanii jiru.
Kana malees, qabsoo Bilisummaa kana irratti gootota lubbuu isaanii qaalii aarsaa godhan yaadachuun akeekni isaani kufan akeeka dhugaa kana dhalootaan dhugoomaa adeemu ta’uu mirkaneessanii jiru.
Sirna ayyaana kanaa irratti miseensi Gumii Sabaa ABO fi gaafatamaan damee beeksissii fi odeessii Alaa ABO, Jaal Gaashuu Lammeessaa, haala qabsoon Bilisummaa Oromoo keessa darbe, yeroo ammaa keessatti argamuu fi egeree qabsoo Bilisummaa ilaalchisanii ibsa bal’aa godhanii jiru.
Qabsoo Bilisummaa Oromoo kallacha ABOtiin gaggeeffamaa jiruun injifannooleen boonsaa galameeffamaa akka jiru kan ibsan Jaal Gaashuu, “qabsoon kun sadarkaa amma irra gahe dhaqqabuuf bu’aa bahii olaanaa fi wareega guddaa baasee jira. Amma illee murnooti addaa dhaaba keenya balleessuuf duula bal’aa bananii jiran. Garuu, tasumaa itti hin milkaa’an,” jedhanii jiru.
“Qabsoon Bilisummaa Oromoo injifannoo galmeesse keessaa inni duraa dhaloota fedhii fi dantaa saba keenyaa kabachiisu kumaatamaan biqilfachaa jiraachuu dha,” kan jedhan Jaal Gaashuun, “har’as dhalooti keenya Qeerroon Bilisummaa saba keenyaa dhugoomsuuf of ijaaranii falmaatti jiru; Oromoonnis bifa addaddaan of ijaaranii eenyummaa isaanii tifkacha ajiraachuun bu’aa argamee dha,” jedhanii jiru.
Akkasuma jaal Umar haala qabsoo Oromoofi sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo irratti bal’inaan erga ibsanii booda hawaasa sirna kana irratti argamaniif dokumentariin kan waraana bilisummaa Oromoo dirree falmaa irraa fi sochiin Qeerroo agarsifameera.
Akkasuma uumata keessaa dhimma qabsoo irratti namni fedhe akka gaaffii gaafatuu karaa miseensa gumii sabaa ABO jaal Gaashuu lammeessa erga dhiyaate booda, namoonni haala qabsoo kana irratti gaaffii gaafataniif deebiin quubsaa kennamee jira.
Dhuma irratti hawaasto Oromoo Austraalia Kibbaa QBO ABOn durfamu cina hiriiruuf waadaa hareefatanii jiru. Kana malees, gumaachaa dhaaba isaanii kan ABOn durfamuuf sochii WBOn gochaa jiruu fi sochii QEERROOn Oromoo gochaa jiru bira dhaabbachuuf gumaachaa maallaqaa gumaachaniiru. Maalaqi isaan gumaachan dolaara Austraali’a 2200 akka ta’e oduun kun dabalee addeessee jira.
Akkasumas, sochii qabsoo Bilisummaa Oromoof deeggarsa qaban ibsa ejjannoo baafatan keessatti mirkaneessanii jiru.
1. Dhaaba keenyaa haga dhumaatti bira dhaabanna!
2. warreen maqaa ABOn sagantaa polotiikaa ABO jijjiirre jedhanii nafxanyaa oromoo cabsee nyaachaa ture waliin hiriiran ni balaalefanna!
3. Tokkummaan oromoo humna waan ta’eef tokkummaan oromoo akka hin sharafamne eeguuf ni qabsoofna!
4. Ayyaanalallattoota ni balaalefanna !
Previous Previous post: Wayyaaneen Ummata Gaaffii Mirgaa fi Amantii Gaafatan Ajjeefte; Diddaanis Itti Fufe.
Next Next post: Ayyaanna Irreechaa Arfaasaa Tulluu Beekii Irratti kabajame!